မြေညီထပ်ဌား အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: May Myo Kyi
Dagon Tsp. Yawmingyi area. Nawaday Road. 1400 sqft.Ground floor.
For office or For Restaurant & etc.
ဒဂုံ ၁ ရှေ့နဝဒေးလမ်း ယောမင်းကြီးရပ်ကွက်
ပေကျယ် ၂၅ ပေ ၅၅ပေ ထပ်ခိုးပါ မြေညီထပ်
နှင့် etc. . . လုပ်ငန်းလုပ်ရန်ကောင်းသောနေရာ
ph. 09973629983 &09250642304